ၦဖၫရစံၫ ဒဲၦၥ့ၪလံၬၥံၪ ကဘၪအၡၪ့ | Radio Veritas Asia
ၦဖၫရစံၫ ဒဲၦၥ့ၪလံၬၥံၪ ကဘၪအၡၪ့
နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ, နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪမၩထၪ့မီၪၥံၪအၥွၪခိၪတၭ, နၥံၪအဖါၥံၪမၩၥံၫအဝ့ၫၥံၪလီၫ.- မွဲမၬ, နၥံၪထိးနၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪအဖါအဆၧမၩ, ဒဲနၥံၪအုၩ့လၩ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪမၩၥံၫမီၪလဖၪတၭ, နၥံၪဝ့ၫဒၪနၥံၪမၩထၪ့ အၥွၪခိၪနီၪလီၫ.-
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ,ယွၩအဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪ,စံၭဝ့ၫ, ယမိအၪ့မၧၫ့လၩ့မီၪ, ဒဲၦဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪၥံၪလၧအအီၪတၭ, မွဲအမိမၩၥံၫဝ့ၫလနၩ့ မိမၩအၧၩ့မၩနၭဝ့ၫလနၩ့လီၫ.- လၧစအၫဘလၭအၥွံၪထီၩ့လၩ့ လၧစဇၭခရဲအၫ လၧအဘၪဆၧမၩၥံၫဝ့ၫ လၧဆၧလုအလးဒဲလၧဆၧလုအဒူၭဖၧၩ့ အဘိၩ့ဆၧၩ့နီၪ, ကယဲမီၪလဖၪအၥွံၪအထံၫလူၫလၩ့အၥၭ လၧဂၪ့ ခိၪအခၪ့ထံၭလံၩလံၩနီၪ ဆၧမိအၪ့ဎၬဝ့ၫလၧၦလဆိၩယီၩ,- မွဲမၬ,ယစံၭနၥံၪတီၩတီၩ,ဆၧမိအၪ့ဎၬဝ့ၫ လၧၦလဆိၩယီၩအစူၪဖၧၩ့လီၫ.
ၦၥ့ၪလံၬၥံၪဧ့, နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧၥ့ၪယၫအနိၪဝံၬနီၪ, နၥံၪဆိၬခွံၬယူၭ. နၥံၪလလ့ၩနုၬ ဘၪလၧနၥံၪအနၫ့ဆါဒၪနၥံၪဝ့ၫလကၭလၧၩ့တၭ, ၦလၧအမိလ့ၩနုၬဝ့ၫလဖၪနီၪ, နၥံၪပဒၩ့အဝ့ၫၥံၪဆ့လီၫ. မွဲအစံၭအဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧနီၪလဖၪအဘိၩ့ဘၭတၭ, ၦကွ့ၭလံၬၥံၪ, ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪမၩထံၬထၬဝ့ၫ ဆီၪ့ဆီၪ့လ့ၬတၭ, ထိၪဂဲၩဝ့ၫချဲၩ့ဆၧအၪမံၩ့အဂဲးတၭ, ဘဲၫၥိၭအမိအီၪက့ၪဆၧမၪလၧအဝ့ၫနီၪအလီၩ့တၭ, အဝ့ၫၥံၪယိၥူၪဝ့ၫအၪ့ဎၬမၩဘံၪဘူၪအဆၧချဲၩ့လီၫ.